आइपीएलको अक्सनमा सन्दिपलाई कुन टिमले खरिद गर्ला ? - Nepal Cricket
आइपीएलको अक्सनमा सन्दिपलाई कुन टिमले खरिद गर्ला ?
विश्वकै सर्वाधिक चर्चित फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेट आईपीएलको १४ औं संस्करणका लागि आज अक्सन हुँदै छ ।
अक्सन अपरान्ह नेपाली समय अनुसार सवा तीन बजे शुरु हुने छ । आईपीएलका फ्रेन्चाइज टिमहरुले २२ जना विदेशीसहित ६१ खेलाडीहरु छनोट गर्नुपर्ने छ । अक्सनमा सन्दीपको न्युनतम मूल्य (बेस प्राइस) ४० लाख भारु रहेको छ ।